Vaovao tsara ho an'ny fizahan-tany Palestine: hotely Betlehema voatokana ho an'ny Krismasy
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Vaovao tsara ho an'ny fizahan-tany Palestine: hotely Betlehema voatokana ho an'ny Krismasy
Ny minisitry ny fizahantany palestiniana Rula Maaya dia nilaza fa feno trano fandraisam-bahiny daholo ny trano fandraisam-bahiny any Betlehema, ary mpizahatany 10,000 XNUMX “mahatalanjona” ao an-tanàna ny alatsinainy alina lasa teo.
Ireo mpivahiny avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao dia nirohotra nankany Betlehema tamin'ny Alatsinainy teo ho any izay fankalazana ny fankalazana Krismasy tanàna lehibe indrindra an-tanànan'ny Banky Andrefana tao anatin'ny taona maro.
"Nandritra ny taona maro no tsy nahitantsika tarehimarika toy izao," hoy izy, ary nanampy fa ireo mpitsidika 3 tapitrisa tao Betlehema tamin'ity taona ity dia nihoatra ny isa an'arivony tamin'ny taon-dasa.
Masera masinina sy mpizahatany manana fiadanam-po no niampita ny tenany ary niondrika tamin'ny rosario rehefa niditra ny fiangonana, ny rivotra matevina manitra.
Mponina sy mpitsidika vahiny an-jatony no nirohotra nanatrika ny Kianja Manger rehefa nanao diaben'ny hazo krismasy goavambe ireo skoto Palestiniana nilalao paosy. Nameno ny Fiangonan'ny nahaterahana ny vahoaka, nohajaina ho toerana nentim-paharazana nahaterahan'i Jesosy, ary niandry ny fidinana tao amin'ny grotto taloha.
"Mahafinaritra ny eo amin'ilay toerana natombohany," hoy ny mpitsidika alemà iray, nisotro kafe Tiorka teo anoloan'ny sarivongan'i Virjiny Maria teo am-pofoana an'i Jesosy zazakely.
Ny fetin'ny Krismasy dia nentim-paharazana nitondra fifaliana ho an'ny Kristiana tao amin'ny Tany Masina, izay nitotongana nandritra ny am-polony taona maro raha oharina amin'ny vahoaka ankapobeny ary vitsy an'isa izao.
Ny amboarampeo dia nihira hira fiderana sy hira fiderana, ny feon'izy ireo nanako nanerana ny plaza.
Tanora palestiniana no nibolisatra satroka Santa ho an'ireo mpizahatany sy ny varavarankelin'ny magazay mitondra soratra hoe "Tonga eto Jesosy" dia nampiseho seho oliva nahaterahana sy fahatsiarovana hafa.
Ny arseveka Pierbattista Pizzaballa, mpitondra fivavahana katolika romana ambony ao amin'ny Tany Masina, dia niditra tao Betlehema rehefa niampita ny toeram-pisavana miaramila israeliana avy tany Jerosalema.
Nandritra ny sasakalin'ny sasakalina tao amin'ny Church of the Nativity, Pizzaballa dia nanao lahateny tamin'ny trano feno mpivavaka sy olo-manan-kaja izay nahitana ny filoha Palestiniana Mahmoud Abbas sy ny praiminisitra Rami Hamdallah.
"Nahatsiravina ity taona lasa ity," hoy i Pizzaballa, miresaka momba ny firongatry ny herisetra teo amin'ny Israeliana sy ny Palestiniana, "ka samy mieritreritra isika fa maloto daholo.
Fa raha esorinao io sosona loto io dia hitantsika fa mahafinaritra be ireo mozaika. ” "Koa satria Krismasy dia tsy maintsy miabo isika," hoy ny arseveka.
Palestine dia azo antoka amin'ny fizahan-tany. Izany dia naverimberina foana nandritra ny taona maro ary nijanona ho zava-misy na eo aza ny fifanenjanana